भाग्यमानी छोरो – Part 29 - सन्ध्या - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 29 – सन्ध्या
त्यसपछी हामी पशुपतिनगर तिर घुम्न गयौं, मैले विकेशलाई भनें “के छ विचार ! अब दार्जिलिङ्गतिर पनि घुमेर मस्ती गर्ने हो की ?” विकेशले पनि रमाउँदै भन्यो “हो यार ! पछी कहिले हो कहिले आएको बेलामा घुमौं जस्तो लाग्यो यार ! टाईम मिला न !” “ल ! त्यसोभए मलाई दुईदिन जति टाईम दे म माहौल मिलाउँछु ।“ हामी पशुपतिनगरमा धेरै बेर नबसिकन फेरी ईलाम बजार फर्कने निधो गर्*यौं, बाटोभरी विकेश अगाडीको सिटमा बस्यो र ड्राईवरसँग गफ गर्दै रह्यो भने म विकेशको आमासँग चल्दै रहें । गोदक भन्ने ठाउँमा रोकेर चालकले खाना खानको रोक्यो, विकेशको आमाले त्यहीं आफ्नो अनुहारलाई पर्सबाट फेसवास निकालेर सफा गरिन् । हामीले त्यहीं खाना खायौं र फर्कियौं । हामी बसेको होटल पुग्दा झण्डै तिन बज्दै थियो, विकेशले म बियर अर्डर गरेर आउँछु भनेर तलै बस्यो । भर्*याङ्ग चढ्ने बेलामा म विकेशको आमाको पछी पछी हिँडे र उनको पुठ्ठालाई प्याट्ट प्याट्ट हान्दै माथी उकालें, जोशैजोशमा मैले विकेशको आमाको स्कर्टलाई माथी सारेर कमरमा पुर्याउँदै उनको पुठ्ठा पनि सहलाउँदै थिएँ । विकेश कोठामा आईपुग्दा म विकेशको आमाको पोका समाउन टि-शर्ट भित्रै हात छिराएर खेलाउँदै किस गरिरहेको थिएँ अनि विकेशको आमाको स्कर्ट यतिखेर पनि कमरमै सोहोरिएको थियो, खुट्टा फट्टिएकोले उनको पुती प्रष्ट देखिन्थ्यो भने विकेशको आमाको हात मेरो पेन्टमाथीबाटै लाँडो सुमसुम्याउँदै थिए ।
विकेश हामीलाई देखेर हाँस्यो मात्र । विकेश भित्र छिरेको केहिबेरमै होटलकी केटी (सन्ध्या) ट्रेमा बियर, बियर ग्लास र सेकुवा लिइर भित्र छिरी । उसलाई देखेर मैले रोकिने प्रयत्न गरिन, तर सन्ध्या हाम्रो चर्तिकला देखेर एकछिन स्तब्ध भएर हेरिरही । म विकेशको आमालाई छोडेर उठें, अनि पेन्टमाथीबाटै आफ्नै हातले लाँडो सुमसुम्याउँदै सन्ध्या भएतिर गएँ, सन्ध्या ट्रे राख्नका लागि झुकेकी थिई । मैले सन्ध्याको चाकका दुवै पुठ्ठालाई च्याप्प समातेर आफ्नो पेन्टमा ठन्किरहेको लाँडोसँग टँसाएर दल्दै भनें “आज सन्ध्यालाई चिक्न मन लाग्यो ?” अनि आफूपनि उसको शरिरसँग आसन्नरुपमा टाँसिएर झुक्दै उसका पोकालाई च्याप्प समाएर ठाडो पारेर उसको गर्धनमा चुम्बन बर्साउन सुरु गरें । सन्ध्याले तुरुन्तै आत्मसमर्पण गरि र आँखा चिम्लेर मलाई साथ दिई, मैले सन्ध्याको शर्टका बटन खोल्न सुरु गरें । सोही मौकामा विकेश उठ्यो र सन्ध्याको मुखमा मुख जोडेर उसको स्कर्ट खोल्न थाल्यो । स्कर्ट खोल्ने क्रममा विकेशको हात उसको स्कर्टको पकेटभित्र छिर्*यो र विकेशको हातमा एउटा प्याकेट पर्*यो । विकेशले भन्यो “मैंयाले चुरोट पनि ल्याएकी रैछौ त ! हामी त चुरोट पिउँदैनौ !” अनि बाहिर निकाल्यो, तर त्यो कण्डमको प्याकेट थियो । म जोडले हाँस्दै भनें “मुजी ! मैंयालाई आज मेरो लाँडो छिराउने हतारै भा’को अवस्था पर्*यो ।
पूर्वतयारीका साथ आएकी रै-छिन् ।“ मैले सन्ध्याको ब्राभित्र हात छिराएर पोका मसल्न थालें । केहिबेरमै सन्ध्यालाई मैले र विकेशले मिलेर पुरै वस्त्रविहिन बनाईसकेका थियौं । मैले सन्ध्यालाई बेडमा सुताएँ र आफ्नो लाँडो निकालेर मुखमा छिराउँदै भनें “मैयाले मेरो लाँडो चुस्दै गर्छे त चिक्न सुरु गर विकेश…!” विकेशले पनि हत्तपत्त लाँडो झिकेर सन्ध्याको पुतीमा छिराउन के आँटेको थियो, सन्ध्या आत्तिदैं मेरो लाँडो मुख बाहिर निकाल्दै भनि “कण्डम लगाएर गर्नुस् न है ?” मैले लाँडो हातले समाएर सन्ध्याको ओंठमा लाँडोले हिर्काउँदै भनें “जाँठी भालू… चिक्नुस् भन् ! तेरो पुतीलाई आज थिलोथिलो पारेर मात्रै छोड्ने हो, होटलमा तलाईं जे कामको लागि राखेको भएपनि आजबाट तँ हाम्रो माल होस् हामी यहाँ बसुञ्जेल ?” विकेशले पनि जोसिदै भन्यो “जाँठी रण्डी ! कण्डम नलगाईकिन चिक्छु तेरो पुतीमा… एड्स लागे लागोस् !” अनि सन्ध्याको पुतीमा लाँडो छिराईहाल्यो, एकछिन सम्म सन्ध्याको मुखमा लाँडो छिराएर चुसापछी मैले भनें “यो जाँठीले चुसेको भन्दा त आमाले कति मजाले चुसिदिनुहुन्छ, आमा विकेशले यो भालुलाई चिकुञ्जेल हजुर मेरो लाँडो चुस्दै गर्नुस् ।“ विकेशको आमाले मेरो लाँडो चुस्न सुरु गर्नुभयो, केहिबेरमै मैले विकेशको आमाको पुतीलाई सन्ध्याको मुखमा टँसाउँदै भनें “जाँठी चुस् आमाको पुती !” अनि विकेशलाई उसको पुतीबाट हटाउँदै भनें “छोड् विकेश ! अब मेरो पालो !” अनि उसको पुठ्ठा सुमसुम्याउँदै भनें “मैयाको चाक त भर्जिन छ जस्तो छ नि ? यता आउने मान्छेले चाकमा चिक्दा रहेनछन् कि क्या हो ?” अनि लाँडोको टुप्पोलाई उसको चाकको प्वालमा दल्दै खेल्न थालें । सन्ध्याले भनि “बङ्गाली र पञ्जाबी मात्रै खाली गाँडको पछाडी लाग्छन् भनेको त नेपाली पनि… छ्या… मलाई नगर्नु है चाकमा…. घिन लाग्छ… नाईं नाईं…. !” “जाँठी तैले नाईं भनेर हुन्छ… (प्याट्ट चाकमा थप्पर बजाउँदै) चिक्ने बेलामा धेरै नखरा नपार है… !” अनि लाँडोलाई जबरजस्ती उसको चाकको प्वालमा ठेल्न थालें । सन्ध्याले चाकमा चिक्न नदिनलाई हरसम्भव प्रयास: गरिरहेकी थिई, मैले थुक दल्दै लाँडोलाई उसको चाकमा छिराउन कोशिस गरिरहेको थिएँ ।
निकै पटक उसको चाकमा बजाएपछी मेरो लाँडो हल्काले सन्ध्याको चाकमा छिर्*यो र सन्ध्या छट्पटिदैं रुन थाली “प्लिज ! निकाल्नु न … दुख्यो के… च्यातिए जस्तो छ मेरो गाँड…. प्लिज…” विकेश आफ्नै आमालाई चिक्दै थियो, विकेशको आमाले आफ्नो मुख लगेर सन्ध्याको मुखमा जोडिन र पोकालाई साह्रै जोडले समाएर अँठ्याईन् । मैले एक झट्कामै पुरै लाँडो सन्ध्याको चाकमा छिराएर धमाधम धक्का पेल्न थालें । सन्ध्याले निकै गाह्रो मानिरहेकी थिई, उसले चाकको प्वाल खुलाउनमा सहयोग गरेकी भए त्यति गाह्रो हुँदैनथ्यो, उसका आँखाबाट अनवरत: आँसु निस्किरहेका थिए । सन्ध्याको मुखबाट अनौठो आवाज नआउने निश्चित भएपछी विकेशको आमाले सन्ध्याको मुखबाट आफ्नो मुख हटाईन् र पोका चुसिदिन थालिन् । विकेशको आमाले भनिन् “आफ्नै आमाको चाकमा त माया नगरि चिक्ने छोराहरुले तिमी भालुको चाकको के माया गर्छन् र ?” सन्ध्या आश्चर्यित भएर विकेशको आमालाई हेरिरही । मैले सन्ध्याको चाकमा फुसी झारिरहँदा तलबाट आवाज आयो “सन्ध्या ! ए सन्ध्या ! कहाँ मरी यो ?” सन्ध्या हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दै आफ्ना लुगा लगाएर ठिक परेर दौडदैं तल झर्दै भनी “हजुर आईहालें !” म पनि बियर र खाजा खाएर सानीआमाको घरतिर लागें, घर पुग्नुभन्दा अगाडी भोलीको दिन र पर्सिको दिन विकेशसँग मेरो भेट नहुने गरि म विदा भएँ । घर पुग्दा आमा र सानीआमा एकापसमा कुराकानी गरिरनहनुभएको थियो, बहिनीलाई लिन हजुरआमा स्कूल जानुभएको रहेछ । आमालाई मैले सोधें “आमा ! काम सकिएको भए दुई चार दिन दार्जिलिङ्गतिर घुम्न पो जाने हो की ?” “एक दुई दिन पर्खि न त ! यता पनि सबै चाँजो पाँजो मिलाएर जाउँला नि त ? बरु पैसा पो छैन त ?” “पैसा त मैले ल्याएको छु नि ! चिन्ता नगर्नुस् !”
chak chikeko katha, chikeko katha, chikeko nepali story, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, mam sanga chikeko, naango boobs, nepali chikeko story, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex stories, nepali sex story, nepali sexy story, nepali sexy story nepali, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, puti chikeko nepali, puti chikeko story, puti mai jhardiy, puti mai jhardiye, rubina, rubina chikeko, sex katha, sexy katha, चियाबारीमा
Nepali Sex Story | Tuition Mam Le Lado Chusnu Vayo